Sulieman gaal dhoofye Silaanyo ma ku dhiiran doonaa by Abdi Mustafe‏
Sulieman gaal dhoofye Silaanyo ma ku dhiiran doonaa by Abdi Mustafe‏ 0 June 29, 2015 in Articles by somalilandlive Staff Visits: 571
Sulieman gaal dhoofye Silaanyo ma ku dhiiran doonaa by Abdi Mustafe‏ Maanta
ayuu Sulieman gaal ka dhoofay gegada Hargiesa isagoo ku laabtay cusbitaal kii misigta birta u gelyey in uu la socdo xaalku siduu yahay. Hadaba sua'ashu waxa weeye Silaanyo shalay buu dhaariyey gudoomiyihii maxkamada sare ee arinta doorashada ma ku dhiiran doonaa oo ma isagaa saxeexi wixii la isla qaatay mise maxkamada ayuu u diri doonaa. Dabcan Silaanyo wey sii wada tashadeen Sulieman gaal oo waakii isaga iyo shir gudoonka guurtuda uugu yeedha doraad madaxtooyada oo wax bay isku ogyiin. Labada xisbi mucaaradna waxa ka go'an hadii Silaanyo ku dhiiran waayo in uu hirgeliyo heshiiskii sadexda iyo Saylici wada saxeexeen in dowlada kalsoonida lagala noqdo oo xukuumad dalka doorasho gaadhsiisa la
dhiso. Isku soo xoori oo waxa muuqata in aan dalku hogaan adag oo qaraar qaadan kara lahayn hase yeeshii sida xaalku ku socdaa waxay u eegtay in cimriga dowladani soo gaabanayo oo ama mudaharado isdaba jooga
lagu ridayo sida kacdoonka dalalka carabta ka dhacay ama dowlad ku meel
gaadha la samayn doono.
Abmustafe123@gmail.com No Comments yet... Print
Name: Email: Website: Security Code: Comment: Social Media Related Items Murashaxa Madaxweynaha WADDANI oo Maqaaxida Baraada ee Berbera Kala Shaaheeyey Boqolaal Ka Mid ah Dadweynaha Ku Dhaqan Magaaladdaasi+SAWIRO